Etu esi eji App IO maka ịkwụ ụgwọ, nkwụghachi na nkwukọrịta ulator Emulator.online ▷ 🥇
Ọ bụrụ na anyị na-ege ntị na teknụzụ ọhụụ nke steeti Italy bidoro anyị anụrịrị nke ngwa ngwa IO ọhụrụ, nke PagoPA mepụtara ma nwee ike itinye ya na ekwentị ọ bụla ma jiri ya ụmụ amaala Italiantali niile. Ọtụtụ ndị ọrụ hụrụ onwe ha na nsogbu ozugbo n'iji ngwa IO ka ha na-ebudata ngwa ahụ na ngwaọrụ a na-ebugharị na-amaghị otu esi eji ya, ihe ọ bụ maka, ma ọ bụ otu esi abanye, nke nwere ike iyi ozugbo. agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na anyị anụtụbeghị banyere SPID na njirimara dijitalụ (ọ dị mwute na ọ dị mkpa iji nwee ike iji ngwa IO).
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ga-egosi gị otu esi eji ngwa IO maka ịkwụ ụgwọ, nkwụghachi na nkwukọrịta gọọmentị, iji nwee ike ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa n'ụlọ ahịa ma ritekwa uru na atụmatụ metụtara imefu ego na ihe nrite ndị edobere maka ndị na-emefu ego ụfọdụ.
Etu esi eji ngwa IO
Ngwa IO dị mfe iji, mana iji nwee ike iji ya mee ihe n'ụzọ zuru oke nke mbụ anyị ga-enweta SPID, wee gaa n'ihu na nbudata ma nweta ngwa ahụ. N’isiokwu ndị na-esonụ, anyị ga-egosikwa gị otu esi etinye kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ kaadị akwụgoro ụgwọ na otu esi enweta ọkwa gbasara nkwukọrịta na gọọmentị.
Mee ka SPID rụọ ọrụ ma budata ngwa IO
Tupu imalite iji ngwa IO, anyị ga-emerịrị SPID, nke bu ihe dijitalụ nke ndi Italian State kwadoro. Enwere ike ịnweta kaadị njirimara a pụrụ iche site n'aka ọtụtụ ndị na-enye ọrụ, ndị na-enye ya n'efu (yabụ na anyị agaghị akwụ ụgwọ ihe ọ bụla maka ya). Ugbu a ndị na - enye ihe kacha mma iji rụọ ọrụ SPID ngwa ngwa Abụ m:
Enyere PosteID SPID
SPID jiri ID Namirial
AJ SP AHID Aruba
Kedu onye na-eweta ọrụ ị họọrọ, jupụta na data achọrọ, họrọ usoro nyocha nke kachasị anyị mma (dịka ọmụmaatụ, maka Poste Italiane ọ dịkwa mma ịga ụlọ ọrụ nzipu ozi) wee nweta nzere SPID, nke a ga-eji emechaa na ngwa IO. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ka esi arụ ọrụ SPID site na nkwụsị, anyị na-akpọ gị oku ka ị gụọ ntuziaka anyị Otu esi arịọ ma nweta SPID mi Otu esi eme ka SPID rụọ ọrụ: ntuziaka zuru oke.
Mgbe anyị nwesịrị SPID anyị nwere ike budata ngwa IO n'efu maka gam akporo na iPhone site na Playlọ Ahịa Google Play na Apple App Store.
Tinye kredit, akwugo ugwo ma o bu kaadi debit
Ozugbo agbakwunyere ngwa ahụ na ngwaọrụ mkpanaka anyị, mepee ya, pịa bọtịnụ ahụ Nbanye na SPID anyị na-ahọpụta onye na-eweta SPID nke anyị ji kee njirimara dijitalụ.
Anyị na-abanye koodu nyocha, gosipụta data enwetara na SPID wee nabata ọnọdụ nke ojiji nke ngwa ahụ. Na ihuenyo ọzọ anyị na-ahọrọ PIN-ọnụọgụ ọnụọgụ 6, anyị na-ahọrọ ma ị ga-arụ ọrụ nyocha nke biometric ma anyị kwadoro adreesị ozi-e (enwetarala site na SPID).
Ozugbo ị banyere na ihuenyo nke ngwa anyị nwere ike itinye kaadị akwụmụgwọ, kaadị akwụgoro ụgwọ (dị ka Postepay) ma ọ bụ kaadị ATM site na ịpị na ala menu Obere akpa, na ịpị aka nri elu nke mmewere gbakwunyeahọrọ edemede Ụzọ nkwụnye ụgwọ na ịhọrọ n'etiti Ebe E Si Nweta, debit ma ọ bụ kaadị akwụgoro ụgwọ, BancoPosta ma ọ bụ kaadị Postepay mi Kaadị ịkwụ ụgwọBAMCOMAT. Anyị na-eme nhọrọ ahụ dabere na ụdị kaadị anyị nwere, mgbe ahụ anyị na-abanye nọmba kaadị, ụbọchị ngwụcha na koodu nchekwa kaadị (CVV2, na-abụkarị na azụ). Na njedebe anyị pịa Jide ka iji iji kwado mgbakwunye nke kaadị na ngwa IO.
Mgbe ị gbakwunyechara usoro ịkwụ ụgwọ dị irè na ngwa IO, anyị banyere menu Banyere anyị n'okpuru iji chọpụta atụmatụ ndị ọzọ bara uru nke ngwa ahụ: kwụọ ụgwọ ụgbọ ala, họrọ ebe ị ga-emefu ihe ndepụta ego ezumike, nata ọkwa banyere bọchị ụtụ nke IMU na ụtụ isi TASI, nata ọkwa banyere ngafe nke Mba (ụtụ ụtụ isi), kwụọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ yana Tinye n'ọrụ nkwụghachi.
Ọ bụrụ na obodo anyị dị n'etiti ndị ahụ a kpọtụrụ aha (anyị nwekwara ike iji aka gị tinye obodo ahụ wee hụ ma ọ jikọtara ya na ọrụ PagoPA) anyị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụtụ isi niile n'ịntanetị, na-eji otu n'ime usoro ịkwụ ụgwọ akwụ ụgwọ. Anyị nwere mmasị ịkwụghachi steeti? Na nke a, anyị na-akpọ gị oku ka ị gụọ ntuziaka anyị Otu esi eme ka ego Cashback rụọ ọrụ: kaadị, ọnọdụ na oke.
Etu ị ga-esi enweta nkwukọrịta site na nchịkwa ọha
Na mgbakwunye na kaadị ahụ, anyị chọrọ iji ngwa IO iji nweta nkwukọrịta site na nchịkwa ọha? N'okwu a, o zuru ezu iji debe ngwa ahụ na ekwentị ahụ, ebe ọ bụ na nkwukọrịta ọhụrụ ọ bụla a ga-eziga ozi na ihuenyo (ọ bụrụ na ọkwa ahụ apụtaghị, lelee ntọala nchekwa ike, ọkachasị na gam akporo). Ka anyị ghara ịhapụ ịma ọkwa, anyị nwekwara ike iziga ozi site na ngwa IO na adreesị ozi-e anyị: iji mee nke a, mepee ngwa IO na ekwentị gị, banye na PIN ma ọ bụ ohere biometric, pịa ala menu Profaịlụ, họrọ menu Ebugharị ozi site na email na n’ikpeazụ pịa na mmewere Kwado maka ọrụ niile. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji aka anyị họrọ ọrụ anyị ga-esi enweta ozi na igbe ozi email, anyị na-ahọrọ ihe ahụ Họrọ ọrụ site na ọrụ ma gosi ụdị ozi anyị chọrọ ịnata.
Ọ bụrụ n’ịga n’ihu na-enwe nsogbu na nkwupụta ngwa IO, anyị na-akwado ka ị gụọ ntuziaka anyị Ọ bụrụ na notma Ọkwa na-egbu oge, gbanyụọ njikarịcha batrị gam akporo mi Melite ificationsma Ọkwa Android na mkpọchi ihuenyo.
Ngwa IO bụ nke kachasị mma na ọkwa IT nke Ọchịchị createdtali mepụtara: n'eziokwu, ngwa ahụ dị mfe iji, ọ na-ejikọ ọrụ SPID niile nke ọma, na-enye gị ohere ịnata nkwụghachi nke steeti nyere, rụọ ọrụ ọrụ ụtụ isi na ụtụ isi na ụdị ndị ọzọ nke nkwukọrịta ụlọ ọrụ, na-enweghị inwe nkwukọrịta adreesị PEC (nke akwadoro ịzaghachi ozi anatara).
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta akwụkwọ ozi enyere aka ịzaghachi ozi ịntanetị ụlọ ọrụ, anyị na-akwado ka ị gụọ isiokwu anyị. Etu ị ga-esi nweta adreesị ozi-e PEC (ozi akwadoro).
Ọ bụrụ, n’ụzọ ọzọ, anyị na-achọ ezigbo kaadị akwụ ụgwọ iji jikọta ya na ngwa IO, anyị nwere ike ịgụ echiche anyị. Kacha mma free kaadị akwụmụgwọ mi Kaadị akwụ ụgwọ kacha mma ịzụta n'ịntanetị na-enweghị ihe egwu.